Intengo Yomkhiqizo Oku-inthanethi Ingakuthonya Kanjani Ukuziphatha | Martech Zone
Intengo Yomkhiqizo Oku-inthanethi Ingakuthonya Kanjani Ukuziphatha
NgoMsombuluko, Okthoba 15, 2018 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
I-psychology engemuva kwe-ecommerce iyamangalisa impela. Ngingumuntu othanda ukuthenga online futhi ngivame ukumangazwa yizo zonke izinto engizithengayo ebengingazidingi kodwa bekumnandi nje noma kuyinto enhle kakhulu ukuthi ungadlula! Lokhu infographic kusuka Wikibuy, Ama-Hacks Wentengo We-13 Wokukhulisa Ukwengeza Ukuthengisa, ichaza umthelela wentengo nokuthi indlela yokuziphatha kungathonywa kanjani kalula ngama-tweaks amancane.
Intengo yezengqondo kuyindlela esebenzayo yokuthengisa yokushayela amabhizinisi. Ngokungena kwi-psychology yabantu nangendlela abathengi ababona ngayo intengo nenani, amabhizinisi ayakwazi ukuthengisa imikhiqizo ngokuheha futhi abe nomthelela ezinqumweni zokuthenga. Ngaphezu kokuchitshiyelwa kwamanani entengo, ukunikela ngamanani esaphulelo, ukunikezwa kwe-BOGO, namakhuphoni kungenye indlela esekelwa ngocwaningo yokuthonya ukuthengisa.
Ungavumeli isikhathi amanani ezingqondo futhi ama-hacks akuvale. Iqiniso ukuthi, eminyakeni edlule sifundise abasebenzisi be-inthanethi ukuthi yini okufanele bayibheke kakhulu futhi izimbangi zethu zincike kakhulu kulezi zindlela. Ngenkathi ungazizwa sengathi lokhu kuyakhohlisa, zombili izindlela ezijwayelekile neziqinile ezinhle ku- ulungiselela amanani akho online.
Ukuqiniswa komkhiqizo isu lapho isu lomthengi linikezwa umkhiqizo osheshayo noma ukuqhathaniswa kwamanani ukuze kusindwe kakhulu isinqumo sabo sokuthenga.
Iyini intengo ye-Charm kanye ne-Left Digit Effect?
Lapho ufunda amanani, kunesu elaziwa njenge umphumela wamadijithi angakwesokunxele lapho abathengi bebeka khona ukunakwa okungalingani kunani ledijithi elingakwesokunxele ngentengo. Ngakho-ke intengo efana ne- $ 19.99 ngokomqondo ibonakala isondele ku- $ 10 kune- $ 20. Lokhu kwaziwa njengamanani entelezi.
Iyini intengo yenqwaba?
Ukuhlukanisa imikhiqizo efanelekile ekuthengweni okukodwa, okunesaphulelo kwaziwa njengentengo yenqwaba. Kuvame ukusetshenziselwa ukuqeda izinto ezigcwele ngokweqile ezingathengisi futhi.
Nazi izindlela zokwenza intengo eziyi-13:
Khombisa intengo kumafonti amancane ngakho-ke zibonwa njengezintengo ezincane.
Bonisa izinketho ze-premium kuqala ngakho-ke okwesibili kubonakala kungukuthengiselana.
Sebenzisa intengo yenqwaba ukukholisa abathengi ukuthi bathola ukuthengwa kwenani eliphakeme ngesaphulelo esikhulu sezinto eziningi.
Susa ukhefana kusuka kuzintengo ukuze zibonwe njengezintengo eziphansi.
Nikeza abathengi ithuba lokukhetha khokha kancane kancane ngakho-ke baqinisa izingqondo zabo kunani elincane.
Ukunikeza izinto ezintathu ezinamanani ahlukahlukene nale ofuna bayithenge phakathi.
Isikhundla amanani aphansi kwesobunxele ukulandela isimilo somqondo ongakwesokunxele kuye kwesokudla entengweni.
Sebenzisa izinombolo eziyindilinga ngokuthengwa okungokomzwelo nezinombolo ezingezelwe ukuthengwa okunengqondo.
Inani kusuka phezulu kuye phansi ngokuvundlile ukulandela indlela yokuziphatha esezingeni eliphezulu kuye phansi.
Engeza ukungafani okubonakalayo ngokushintsha ifonti, usayizi, nombala wento yokuthengisa bese uyibeka kude kude nezinye izintengo ukuze unakwe.
Uma wenza intengo, sebenzisa amagama anjengelincane nelincane ukuhlobanisa ukuthengwa ne- ubukhulu obuncane.
Qeda amanani ngo- $ 9 ukushintsha umbono wentengo ube mncane.
Susa izimpawu zedola ukushintsha umbono wentengo yomkhiqizo. Esifundweni saseCornell, abathengi basebenzise ama-8% ngaphezulu lapho kususwa uphawu lwedola
Tags: i-anchoringintengo yenqwabaamanani enteleziizimpawu zemaliizimpawu zedolaezokuhweba ngekhompyuthaumphumela wamadijithi angakwesokunxelezamananiisethulo somkhiqizo
Qagela? I-Vertical Video ayiyona nje ejwayelekile, iyasebenza kakhulu
Ukuguqulwa kwedijithali kuyinkinga yobuholi, hhayi inkinga yezobuchwepheshe